amthing.com (“amthing.com") Isebenza www.amthing.com kwaye inokusebenza kwezinye iiwebhusayithi. Umgaqo-nkqubo we-Amthing ukuhlonipha ubumfihlo bakho ngokubhekisele kulo naluphi na ulwazi esinokuluqokelela ngelixa sisebenzisa iwebhusayithi yethu.
Njengoninzi lwabasebenzisi bewebhusayithi, amthing.com iqokelela ulwazi olungazichazanga ngokobuqu lolu hlobo lwebrawuza kunye neeseva ezenza ukuba zifumaneke, ezinje ngohlobo lwesikhangeli, ukhetho lolwimi, indawo ekubhekiswa kuyo, kunye nomhla kunye nexesha lesicelo ngasinye sendwendwe. Injongo ye-Amthing ekuqokeleleni ulwazi olungelulo olobuqu kukuqonda ngcono ukuba iindwendwe zeAmthing ziyisebenzisa njani iwebhusayithi yayo. Amaxesha ngamaxesha, i-amthing.com inokukhupha ulwazi olungelulo oluchongiweyo kumdibaniso, umzekelo, ngokupapasha ingxelo yendlela esetyenziswa ngayo iwebhusayithi yayo.
amthing.com ikwaqokelela ulwazi olunokuthi lubonakalise ubuqu njenge-Intanethi Protocol (IP) iidilesi zabasebenzisi abangene ngemvume kunye nabasebenzisi abashiya amagqabantshintshi kwi-www.amthing.com blogs / sites. amthing.com ityhila kuphela ukungena kumsebenzisi kunye nokugqabaza iidilesi ze-IP phantsi kweemeko ezifanayo ezisebenzisa kwaye zichaze ulwazi oluchonga ubuqu njengoko kuchaziwe apha ngezantsi, ngaphandle kokuba iidilesi ze-IP kunye needilesi ze-imeyile ziyabonakala kwaye zichaziwe kubalawuli bebhlog / indawo apho amagqabantshintshi ashiywe.
Ukuqokelelwa kweNkcukacha eziChonga uMntu
Abanye abatyeleli kwiiwebhusayithi zeAmthing bakhetha ukusebenzisana ne-amthing.com ngeendlela ezifuna amthing.com ukuqokelela ulwazi oluchonga ubuqu. Ixabiso kunye nohlobo lolwazi oluqokelelwa ngu-amthing.com luxhomekeke kubume bokunxibelelana. Umzekelo, sicela iindwendwe ezibhalisela i-www.amthing.com ukuba zinike igama lomsebenzisi kunye nedilesi ye-imeyile. Abo babandakanyeka kwintengiselwano kunye ne-amthing.com bayacelwa ukuba banikezele ngolwazi olongezelelekileyo, kubandakanya njengoko kufuneka ulwazi lomntu kunye nolwezemali olufunekayo ukuqhubekeka. Kwimeko nganye, amthing.com iqokelela olo lwazi kuphela njengoko kufanelekile okanye kufanelekile ukufezekisa injongo yokunxibelelana kwabakhenkethi kunye ne-amthing.com. amthing.com ayichazi ulwazi oluchonga ubuqu ngaphandle kokuchazwa ngezantsi. Kwaye iindwendwe zihlala zala ukubonelela ngolwazi oluchonga ubuqu, kunye nomqolomba onokuthi ubathintele ekuzibandakanyeni kwizinto ezithile ezinxulumene newebhusayithi.
amthing.com inokuqokelela amanani malunga nokuziphatha kweendwendwe kwiiwebhusayithi zayo. amthing.com ingabonisa olu lwazi esidlangalaleni okanye inike abanye. Nangona kunjalo, i-amthing.com ayivezi ulwazi oluchonga ubuqu ngaphandle kokuchazwa ngezantsi.
Ukukhuselwa koLwazi oluKhethekileyo oluKhethekileyo
amthing.com ityhila ulwazi olunokuthi lubonakalise ubuqu kunye nolwazi oluchaphazela ubuqu kuphela kwabo babasebenzi, iikontraki kunye nemibutho esebenzisana nayo (i) ekufuneka ilwazi olo lwazi ukuze luqhubekeke egameni lika-Amthing okanye ukubonelela ngeenkonzo ezifumaneka kwiiwebhusayithi zeAmthing, kwaye (ii) avumile ukuba angayichazi le nto kwabanye. Abanye babaqeshwa, iikontraki kunye nemibutho emanyeneyo inokubakho ngaphandle kwelizwe lakho; ngokusebenzisa iiwebhusayithi zeAmthing, uyavuma ukudlulisela olo lwazi kubo. amthing.com ayizukurenta okanye ithengise ulwazi olunokuthi lubonakalise ubuqu kunye nokuchonga ulwazi kuye nakubani na. Ngaphandle kwabasebenzi bayo, iikontraki kunye nemibutho esebenzisana nayo, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, amthing.com ichaza ulwazi olunokuchonga ubuqu kunye nokuchonga ulwazi lobuqu kuphela ekuphenduleni isamani, umyalelo wenkundla okanye esinye isicelo sikarhulumente, okanye xa i-amthing.com ikholelwa kokulungileyo ukholo lokuba ukubhengezwa kuyimfuneko ngokufanelekileyo ukukhusela ipropathi okanye amalungelo e-amthing.com, umntu wesithathu okanye uluntu ngokubanzi. Ukuba ungumsebenzisi obhalisiweyo wewebhusayithi ye-amthing.com kwaye ubonelele ngedilesi ye-imeyile, amthing.com ngamanye amaxesha inokukuthumelela i-imeyile ukukuxelela malunga nezinto ezintsha, ukucela ingxelo yakho, okanye ukukugcina unolwazi malunga nokwenzekayo nge-amthing.com kunye neemveliso zethu. Ukuba usithumela isicelo (umzekelo nge-imeyile okanye ngenye yeendlela zethu zempendulo), sinelungelo lokuyipapasha ukuze isincede okanye icacise isicelo sakho okanye isincede sixhase abanye abasebenzisi. amthing.com ithatha onke amanyathelo ayimfuneko ukukhusela ekufikelelekeni okungagunyaziswanga, ukusetyenziswa, utshintsho okanye ukutshatyalaliswa kolwazi olunokuchonga ubuqu kunye nolwazi lomntu.
Icookie ngumtya wolwazi olugcinwa yiwebhusayithi kwikhompyuter yabatyeleli, kwaye isikhangeli somtyeleli sibonelela kwiwebhusayithi ngalo lonke ixesha undwendwelo lubuya. amthing.com isebenzisa iicookies ukunceda amthing.com ukuchonga kunye nokulandelela iindwendwe, ukusetyenziswa kwazo iwebhusayithi ye-amthing.com, kunye nokukhetha ukufikelela kwiwebhusayithi. iindwendwe zeamthing.com ezinganqweneli ukuba ii-cookies zibekwe kwiikhompyuter zazo kufuneka zisete iibrowser zazo ukuba zenqabe ii-cookies ngaphambi kokusebenzisa ii-Amthing's websites, kunye nokubuyela umva kwezinye izinto zewebhusayithi yeAmthing ezinokuthi zingasebenzi kakuhle ngaphandle koncedo lweicookies.
Ukuba amthing.com, okanye ubukhulu becala zonke ii-asethi zayo, zafunyanwa, okanye kwimeko engalindelekanga yokuba i-amthing.com iphuma kwishishini okanye ingene kwi-bankrupt, ulwazi lomsebenzisi luya kuba yenye yeempahla ezigqithisiweyo okanye ezifunyenwe ngumntu wesithathu. Uyavuma ukuba olo tshintsho lunokwenzeka, kwaye nawuphi na umntu ofumana i-amthing.com angaqhubeka nokusebenzisa ulwazi lwakho njengoko kubekiwe kulo mgaqo-nkqubo.
Iintengiso ezibonakala nakweyiphi na iwebhusayithi yethu zinokuziswa kubasebenzisi ngamaqabane entengiso, anokuthi asete ikuki. Ezi cookies zivumela iseva yentengiso ukuba ibone ikhompyuter yakho ngalo lonke ixesha ikuthumela intengiso ekwi-intanethi ukuqokelela ulwazi malunga nawe okanye abanye abasebenzisa ikhompyuter yakho. Olu lwazi luvumela uthungelwano lweentengiso ukuba, phakathi kwezinye izinto, luzise iintengiso ekujoliswe kuzo abakholelwa ukuba ziya kuba nomdla kuwe. Lo mgaqo-nkqubo wabucala ugubungela ukusetyenziswa kweicookies ngu-amthing.com kwaye awugubungeli ukusetyenziswa kweicookies ngabo nabaphi na abathengisi.
Utshintsho kuMgaqo-nkqubo Wabucala
Nangona uninzi lweenguqu ezinokubakho zincinci, i-amthing.com inokutshintsha uMgaqo-nkqubo wabucala amaxesha ngamaxesha, nakwimbono yeAmthing. amthing.com ikhuthaza iindwendwe ukuba zijonge eli phepha rhoqo ngalo naluphi na utshintsho kuMgaqo-nkqubo wabucala. Ukuba unayo iakhawunti ethi www.amthing.com, unokufumana isilumkiso esikwazisa ngolu tshintsho. Ukusetyenziswa kwakho okuqhubekayo kwesi siza emva kwalo naluphi na utshintsho kulo Mgaqo-nkqubo wabucala kuya kwenza ukuba ulwamkele olo tshintsho.
Le migaqo kunye neemeko zilawula konke ukusetyenziswa kwewebhusayithi ethi www.amthing nayo yonke imixholo, iinkonzo kunye neemveliso ezikhoyo okanye ezenziwa kwiwebhusayithi (zithathwe kunye, iWebhusayithi). Indawo yeWebhusayithi yeyakho kwaye iqhutywa yi-amthing ("amthing"). Indawo yeWebhusayithi inikezelwa ngokuxhomekeke ekwamkelweni kwakho ngaphandle kokulungiswa kwayo yonke imigaqo kunye neemeko eziqulathwe apha nayo yonke eminye imigaqo yokusebenza, imigaqo-nkqubo (kubandakanya, ngaphandle komda, Umgaqo-nkqubo Wobumfihlo we-Amthing) kunye neenkqubo ezinokupapashwa amaxesha ngamaxesha kule ndawo ngo into (ngokudibeneyo, "isiVumelwano").
Nceda ufunde esi siVumelwano ngononophelo ngaphambi kokungena okanye ukusebenzisa iWebhusayithi. Ngokungena okanye ukusebenzisa nayiphi na indawo yewebhu, uyavuma ukuba ubotshelelwe yimigaqo nemiqathango yesi sivumelwano. Ukuba awuvumelani nayo yonke imigaqo nemiqathango yesi sivumelwano, awunakufikelela kwiWebhusayithi okanye usebenzise naziphi na iinkonzo. Ukuba le migaqo nemiqathango ithathwa njengonikelo ngento ethile, ulwamkelo lucacisiwe kule migaqo. IWebhusayithi ifumaneka kuphela kubantu abaneminyaka eli-13 ubuncinci.
1 Iakhawunti yakho yeSayithi kunye neSayithi.
Ukuba wenza ibhlog / indawo kwiWebhusayithi, unoxanduva lokugcina ukhuseleko lweakhawunti yakho kunye nebhlog, kwaye uxanduva lwakho ngokupheleleyo kuyo yonke imisebenzi eyenzeka phantsi kweakhawunti kunye naziphi na ezinye izinto ezenziweyo ngokunxulumene nebhlog. Akufanele uchaze okanye unike amagama aphambili kwibhlog yakho ngendlela elahlekisayo okanye engekho semthethweni, kubandakanya indlela ekujongwe ukuba ithengise igama okanye igama labanye, kwaye into inokutshintsha okanye isuse nayiphi na inkcazo okanye igama eliyintloko elibona lingafanelekanga okanye lisemthethweni, okanye Ngaphandle koko kusenokwenzeka ukuba kubangele into kufuneka kwangoko wazise ngento nantoni na engagunyaziswanga yebhlog yakho, iakhawunti yakho okanye naluphi na ulwaphulo-mthetho. Into ayizukubekwa tyala ngayo nayiphi na into okanye ukushiya izinto nguWe, kubandakanya nawuphi na umonakalo walo naluphi na uhlobo olwenziwe ngenxa yezenzo ezinjalo okanye ukushiywa.
2. Uxanduva lwaBanegalelo.
Ukuba usebenzisa ibhlog, phawula ngebhlog, thumela izinto kwiWebhusayithi, uthumele amakhonkco kwiWebhusayithi, okanye wenze enye (okanye uvumele naliphi na iqela lesithathu ukuba lenze) izinto ezikhoyo ngeWebhusayithi (nayiphi na into enjalo, "Umxholo" ) Unoxanduva olupheleleyo lomxholo, kwaye nakuphi na ukwenzakala okubangelwa koko. Injalo imeko nokuba umxholo ekuthethwa ngawo wenza isicatshulwa, imizobo, ifayile yeaudio, okanye isoftware yekhompyuter. Ngokwenza uMxholo ufumaneke, umele kwaye uqinisekise ukuba:
ukukhuphela, ukukopa kunye nokusetyenziswa kwesiqulatho akusayi kunyhasha amalungelo obunini, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kumalungelo obunini, amalungelo awodwa omenzi wechiza, uphawu lwentengiso okanye amalungelo ayimfihlo orhwebo, alo naliphi na iqela lesithathu;
ukuba umqeshi wakho unamalungelo kwipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda oyenzileyo, mhlawumbi (i) uyifumene imvume kumqeshi wakho yokuthumela okanye enze ukuba uMxholo ufumaneke, kubandakanywa kodwa kungaphelelwanga kuyo nayiphi na isoftware, okanye (ii) ukhusele umqeshi wakho onke amalungelo kwi okanye kuMxholo;
uthobele ngokupheleleyo naliphi na iphepha-mvume lesithathu elinxulumene noMxholo, kwaye wenze zonke izinto eziyimfuneko ukuphumelela ngempumelelo ukugqiba abasebenzisi nayiphi na imigaqo efunekayo;
umxholo awuqulathanga okanye ufakele naziphi na iintsholongwane, iintshulube, i-malware, amahashe eTrojan okanye enye into eyingozi okanye eyonakalisayo;
Umxholo awungogaxeki, awenziwanga ngomatshini okanye awenziwanga ngokungacwangciswanga, kwaye awuqulathanga mgaqo wokuziphatha ongafunekiyo okanye ongafunekiyo oyilelwe ukuqhuba ukugcwala kwiziza zomntu wesithathu okanye ukonyusa inqanaba lokukhangela kwiisayithi zomntu wesithathu, okanye ukwenza ezinye izinto ezingekho mthethweni (ezinje njengobuqhetseba) okanye ulahlekise abamkeli malunga nomthombo wezinto (ezinje ngokukhwabanisa);
Umxholo awuyiyo iphonografi, ayiqulathanga izoyikiso okanye inkuthazo yobundlobongela kubantu abathile okanye amaziko, kwaye ayaphuli amalungelo abucala okanye amalungelo okuthengisa nawuphina umntu wesithathu;
ibhlog yakho ayithengiswa ngemiyalezo ye-elektroniki engafunekiyo enje ngeziqhagamshelo zogaxekile kumaqela eendaba, uluhlu lwe-imeyile, ezinye iibhlog kunye neewebhusayithi, kunye neendlela ezifanayo ezingafunekiyo zentengiso;
unayo, kwimeko yesiqulatho esibandakanya ikhowudi yekhompyuter, ehlelwe ngokuchanekileyo kunye / okanye uchaze uhlobo, uhlobo, ukusetyenziswa kunye nefuthe lezixhobo, nokuba uceliwe ukuba wenze njalo nge-amthingor ngenye indlela.
Ngokungenisa uMxholo kwizinto zokufakwa kwiWebhusayithi yakho, unika into yelizwe liphela, engenasimahla, kunye nelayisensi engakhethiyo ukuvelisa kwakhona, ukuguqula, ukulungelelanisa kunye nokupapasha umxholo kuphela ngenjongo yokubonisa, ukuhambisa kunye nokukhuthaza ibhlog yakho. . Ukuba ucima umxholo, i-amthing iya kusebenzisa imizamo efanelekileyo yokuyisusa kwiWebhusayithi, kodwa uyavuma ukuba i-caching okanye izingqinisiso zomxholo zingenziwa ukuba zingafumaneki kwangoko.
Ngaphandle kokuthintela nakuphi na ukumelwa okanye iiwaranti, i-amthing inelungelo (nangona ingesosibophelelo), ngokokubona kuka-Amthing (i) ukwala okanye ukususa nasiphi na isiqulatho, ngokoluvo olufanelekileyo lwe-Amthing, esaphula nawuphi na umgaqo-nkqubo wezinto okanye eyingozi nangayiphi na indlela. okanye ophikisayo, okanye (ii) ukuyekisa okanye ukwala ukufikelela kwiWebhusayithi nakubani na okanye iziko nangasiphi na isizathu, ngokubona kuka-Amthing. Into ayiyi kuba nasibophelelo sokubonelela ngembuyiselo yazo naziphi na izixa-mali ebezihlawulwe ngaphambili.
1 Intlawulo noHlaziyo.
Ngokukhetha imveliso okanye inkonzo, uyavuma ukuhlawula yonke into yexesha elinye kunye / okanye yenyanga okanye yonyaka yemirhumo yobhaliso ebonisiweyo (imigaqo eyongezelelweyo yentlawulo ingafakwa kolunye unxibelelwano). Iintlawulo zobhaliso ziya kuhlawulwa ngokuhlawulelwa kwangaphambili ngomhla obhalisela i-Upgrade kwaye uya kugubungela ukusetyenziswa kwale nkonzo ixesha lokuhlawula ngenyanga okanye lonyaka njengoko kubonisiwe. Iintlawulo azibuyiswa.
Ngaphandle kokuba wazise i-amthing ngaphambi kokuphela kwexesha lokubhalisela elifanelekileyo ukuba ufuna ukucima umrhumo, umrhumo wakho uya kuhlaziya ngokuzenzekelayo kwaye uyasigunyazisa ukuba siqokelele umrhumo osebenzayo wonyaka okanye wenyanga wobhaliso (kunye nayiphi na irhafu) usebenzisa Naliphi na ikhadi lekhredithi okanye enye indlela yokuhlawula esinayo irekhodi lakho. Ukuphuculwa kunokucinywa nangaliphi na ixesha ngokuthumela isicelo sakho kwizinto ezibhaliweyo.
2. Imirhumo; Intlawulo.
Ngokusayinela iakhawunti yeeNkonzo uyavuma ukuhlawula yonke into oyifunayo kunye nemirhumo ephindaphindayo. Imirhumo efanelekileyo iya kufakwa kwi-invoyisi ukusukela kumhla wokusekwa kweenkonzo zakho nangaphambi kokusebenzisa ezo nkonzo. Into inelungelo lokutshintsha imiqathango nentlawulo kwiintsuku ezingamashumi amathathu (30) ngaphambi kokubhalela wena. Iinkonzo zinokurhoxiswa naninina nanini na ngeentsuku ezingamashumi amathathu (30) zesaziso esibhaliweyo sento emfutshane.
Ukuba inkonzo yakho ibandakanya ukufikelela kwinkxaso ephambili ye-imeyile. "Inkxaso ye-imeyile" kuthetha ukukwazi ukwenza izicelo zoncedo lobuchwephesha ngoncedo lwe-imeyile ngalo naliphi na ixesha (ngemizamo efanelekileyo yento yokuphendula kusuku olunye lweshishini) ngokubhekisele ekusetyenzisweni kweeNkonzo zeVIP. “Ukubekwa phambili” kuthetha ukuba inkxaso ithatha indawo ephambili kunenkxaso kubasebenzisi beenkonzo ezisemgangathweni okanye zasimahla ze- www.amthing services. Yonke inkxaso iya kubonelelwa ngokungqinelana neendlela zokwenza iinkonzo ezisemgangathweni, iinkqubo kunye nemigaqo-nkqubo.
3.Uxanduva lwaBatyeleli beWebhusayithi.
Into ayikhange ivavanywe, kwaye ayinakuphonononga, yonke into, kubandakanya isoftware yekhompyuter, eposwe kwiWebhusayithi, kwaye ke ayinakuba noxanduva lomxholo, ukusetyenziswa okanye iziphumo. Ngokusebenza kweWebhusayithi, into ayibonisi okanye ayithethi ukuba ixhasa izinto ezithunyelweyo, okanye ikholelwa ukuba loo nto ichanekile, iluncedo okanye ayinabungozi. Unoxanduva lokuthatha amanyathelo okhuseleko njengoko kufuneka ukuzikhusela kunye neenkqubo zekhompyuter yakho kwiintsholongwane, iintshulube, amahashe eTrojan, kunye nezinye izinto ezinobungozi okanye ezonakalisayo. Indawo yeWebhusayithi inokuba nomxholo okhubekisayo, ongenasidima, okanye ochasayo, kunye nomxholo oqulethe ukungachaneki kwezobuchwephesha, iimpazamo zokuchwetheza kunye nezinye iimpazamo. Indawo yeWebhusayithi inokuba nayo inezinto ezinyhasha amalungelo abucala okanye amalungelo oluntu, okanye inyhasha ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye namanye amalungelo obunini, kubantu besithathu, okanye ukukhuphela, ukukopa okanye ukusetyenziswa kwayo kuxhomekeke kwimigaqo eyongezelelweyo, echaziweyo okanye engachazwanga. Into iyalahla naluphi na uxanduva lwayo nayiphi na ingozi ebangelwe kukusetyenziswa ziindwendwe zeWebhusayithi, okanye nakuphi na ukhuphelo lwazo ngabo batyelele umxholo othunyelwe apho.
4.Umxholo othunyelwe kwezinye iiWebhusayithi.
Khange siyihlolisise, kwaye asinakuphonononga, yonke imathiriyeli, kubandakanya isoftware yekhompyuter, enziwe yafumaneka kwiiwebhusayithi kunye namaphepha ewebhu adityaniswa kuwo www.amthing, kunye nelo khonkco www.amthing. i-amthing ayinalo ulawulo kwiiwebhusayithi ezingezizo ezamakhasi kunye namaphepha ewebhu, kwaye ayinaxanduva lokuqulathiweyo okanye ukusetyenziswa kwazo. Ngokudibanisa iwebhusayithi engekhoyo okanye iphepha lewebhu, i-amthing ayibonisi okanye ayithethi ukuba ixhasa le webhusayithi okanye iphepha lewebhu. Unoxanduva lokuthatha amanyathelo okhuseleko njengoko kufuneka ukuzikhusela kunye neenkqubo zekhompyuter yakho kwiintsholongwane, iintshulube, amahashe eTrojan, kunye nezinye izinto ezinobungozi okanye ezonakalisayo. i-amthing iyalahla naluphi na uxanduva lwayo nayiphi na ingozi ebangelwe kukusebenzisa kwakho iiwebhusayithi ezingezizo ezamayeza kunye namaphepha ewebhu.
5. Ukophulwa kwelungelo lokushicilela kunye noMgaqo-nkqubo weDMCA.
Njengoko into icela abanye ukuba bahloniphe amalungelo ayo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, iyawahlonipha amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda wabanye. Ukuba uyakholelwa kwinto ebekwe okanye enxulunyaniswe ne-www.amthing iphula ilungelo lakho lokushicilela, uyakhuthazwa ukuba wazise amthing ngokungqinelana noMgaqo-nkqubo we-Amillion's Millennium Copyright Act (“DMCA”). into iya kuphendula kuzo zonke izaziso, kubandakanya njengoko kufuneka okanye kufanelekile ngokususa izinto ezaphulayo okanye ukukhubaza lonke ikhonkco kwizixhobo zokwaphula umthetho. Into iya kuphelisa ukufikelela komtyeleli kunye nokusetyenziswa kweWebhusayithi ukuba, phantsi kweemeko ezifanelekileyo, undwendwe lizimisele ukuba luphule amalungelo obunini okanye amanye amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda yento okanye ezinye. Kwimeko yokupheliswa okunjalo, into ayiyi kuba nasibophelelo sokubonelela ngembuyiselo yazo naziphi na izixa-mali ebezihlawulelwe ngaphambili.
Esi siVumelwano asidluliseli nantoni na okanye into yomntu osengqondweni, kwaye konke okufanelekileyo, isihloko kunye nomdla kwipropathi enjalo iya kuhlala (njengaphakathi kwamaqela) kunye ne-amthing. iamthing, www.amthing, ilogo www.amthing logo, nazo zonke ezinye iimpawu zorhwebo, amanqaku enkonzo, imizobo kunye neelogo ezisetyenziswa ngokunxulumene ne www.amthing, okanye iWebhusayithi ziimpawu zorhwebo okanye ziimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo zento okanye ilayisensi yeAmthing. Olunye uphawu lwentengiso, amanqaku enkonzo, imizobo kunye neelogo ezisetyenziswe ngokunxulumene neWebhusayithi zinokuba ziimpawu zorhwebo zomnye umntu. Ukusetyenziswa kwakho kweWebhusayithi akukuniki lungelo okanye ilayisensi yokuvelisa kwakhona okanye ukusebenzisa enye into okanye uphawu lwentengiso lomntu wesithathu.
7.yonke into inelungelo lokubonisa iintengiso kwibhlog yakho ngaphandle kokuba uthenge iakhawunti engenazintengiso.
8.amthing ligcina ilungelo lokubonisa amakhonkco eempawu ezinje nge 'Blog apha www.amthing,' umbhali womxholo, kunye nefonti kwi-blog yeenyawo okanye kwibar yesixhobo.
Ngokusebenzisa imveliso yeqabane (umz. Umxholo) kwelinye lamaqabane ethu, uyavumelana nemigaqo yenkonzo yelo qabane. Unokukhetha ukuphuma kwimigaqo yenkonzo nangaliphi na ixesha ngokuthi ungasebenzi imveliso yeqabane.
Ukuba ubhalisa igama lethambeka, usebenzisa okanye ugqithisa igama ledomeyini ebelibhalisiwe ngaphambili, uyavuma kwaye uyavuma ukuba ukusetyenziswa kwegama lesizinda kuxhomekeke kwimigaqo-nkqubo yeIntanethi yamagama abelweyo kunye neenombolo ("ICANN"), kubandakanya Amalungelo oBhaliso noXanduva.
11.nako konke ukugcina ilungelo, ngokubona kwakhe, ukuguqula okanye ukubuyisela nayiphi na indawo yesi siVumelwano. Luxanduva lwakho ukujonga esi siVumelwano ngamaxesha athile ukuze sitshintshe. Ukuqhubeka kokusebenzisa okanye ukufikelela kwiWebhusayithi emva kokuthunyelwa kwalo naluphi na utshintsho kwesi siVumelwano kubandakanya ukwamkelwa kolo tshintsho. Into inokuthi, kwixesha elizayo, ibonelele ngeenkonzo ezintsha kunye / okanye ngeempawu kwiWebhusayithi (kubandakanya, ukukhutshwa kwezixhobo ezitsha kunye nezixhobo). Ezo mpawu zintsha kunye / okanye iinkonzo ziya kuxhomekeka kwimigaqo nemiqathango yesi siVumelwano.
Nantoni na inokuphelisa ukufikelela kwakho kuyo yonke into okanye nayiphi na indawo yeWebhusayithi nangaliphi na ixesha, ngaphandle kwesizathu, ngaphandle kwesaziso, esisebenza kwangoko. Ukuba unqwenela ukusiphelisa esi siVumelwano okanye iakhawunti yakho yento ethi (ukuba unayo), unokuyekisa ukusebenzisa iWebhusayithi. Ngaphandle koku kuchazwe ngasentla, ukuba unayo iakhawunti yeenkonzo ezihlawulelweyo, iakhawunti enjalo inokupheliswa kuphela ngento ethile ukuba usaphule ngokwesi siVumelwano kwaye usilele ukulungisa olo lwaphulo kungaphelanga iintsuku ezingamashumi amathathu (30) ukususela kwisaziso sika-Amthing kuwe; ukuba, i-amthing inokuphelisa iWebhusayithi kwangoko njengenxalenye yokuvalwa ngokubanzi kwenkonzo yethu. Onke amasolotya esi siVumelwano ngokobume bawo anokuthi asinde ekuphelisweni aya kusinda ekuphelisweni, kubandakanya, ngaphandle komda, ubunini bemiqathango, ukukhutshwa kwewaranti, uxolelo kunye nemida yoxanduva.
13. Ibango leWarranty.
Indawo yeWebhusayithi ibonelelwa "njengoko kunjalo". into kunye nabanikezeli bayo kunye nabanini bamaphepha-mvume ngokwenjenje bayazichasa zonke iiwaranti zalo naluphi na uhlobo, ukuveza okanye ukuveza, kubandakanya, ngaphandle komda, iiwaranti zokurhweba, ukulungela injongo ethile kunye nokungaphuli. Nokuba ayisiyiyo into okanye abathengisi bayo kunye nabaniki layisensi, eyenza nayiphi na iwaranti ukuba iWebhusayithi ayizukufumana mpazamo okanye ukufikelela kuyo kuya kuqhubeka okanye kungaphazanyiswa. Uyaqonda ukuba ukhuphele ngaphandle, okanye kungenjalo ufumane umxholo okanye iinkonzo ngeWebhusayithi ngokokubona kwakho kunye nomngcipheko.
Ukusikelwa umda koxanduva.
Akukho nto iya kwenza nantoni na, okanye abanikezeli bayo okanye abaniki layisenisi, babe noxanduva ngokubhekisele kuwo nawuphi na umba walesi sivumelwano phantsi kwayo nayiphi na ikhontrakthi, ukungakhathali, uxanduva olungqongqo okanye enye imbono esemthethweni okanye enobulungisa yoku: (i) nawuphi na umonakalo okhethekileyo, oyingozi okanye obalulekileyo; (ii) indleko zokuthengwa kweemveliso okanye iinkonzo ezibambeleyo; (iii) ukuphazamiseka kokusetyenziswa okanye ilahleko okanye urhwaphilizo lwedatha; okanye (iv) ngazo naziphi na iimali ezigqithileyo kwimirhumo ehlawulwe nguwe yokuhlawula phantsi kwesi sivumelwano ngethuba leenyanga ezilishumi elinambini (12) phambi kwetyala. Into ayiyi kuba noxanduva kuko nakuphi na ukusilela okanye ukulibaziseka ngenxa yemicimbi engaphaya kolawulo lwayo olufanelekileyo. Oku kungasentla akusayi kusebenza kwimeko ethintelweyo ngumthetho osebenzayo.
15. Ukumelwa ngokubanzi kunye neWaranti.
Umele kwaye uqinisekisa ukuba (i) ukusebenzisa kwakho iWebhusayithi kuya kungqinelana ngokungqongqo noMgaqo-nkqubo wabucala, nesi siVumelwano nayo yonke imithetho nemigaqo esebenzayo (kubandakanya ngaphandle komda kuyo nayiphi na imithetho yendawo okanye ilizwe kwilizwe lakho, kwilizwe, kwisixeko , okanye enye indawo yaseburhulumenteni, malunga nokuziphatha kwe-Intanethi kunye nomxholo owamkelekileyo, kwaye kubandakanya yonke imithetho esebenzayo ngokubhekisele kudluliso lwedatha yobuchwephesha ethunyelwa e-United States okanye ilizwe ohlala kulo) kwaye (ii) ukusebenzisa kwakho iWebhusayithi akunakuphula okanye gwenxa amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda walo naliphi na iqela lesithathu.
16. Uyavuma ukukhusela kwaye ubambe into engenabungozi, iikontraki zayo kunye nabaniki layisenisi, kunye nabalawuli babo, amagosa, abasebenzi kunye neearhente ezivela kuwo onke amabango nenkcitho, kubandakanya nemirhumo yamagqwetha, evela ekusebenziseni kwakho IWebhusayithi, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho waphula esi siVumelwano.
17. Esi siVumelwano sisivumelwano sonke phakathi kwento kunye nawe malunga nomxholo, kwaye zinokulungiswa kuphela ngesilungiso esibhaliweyo esityikitywe ngumlawuli ogunyazisiweyo wento, okanye ngokuthumela ngeposi yenguqulo ehlaziyiweyo. Ngaphandle komthetho osebenzayo, ukuba ukhona, unika ngenye indlela, esi siVumelwano, nakuphi na ukufikelela okanye ukusetyenziswa kweWebhusayithi kuya kulawulwa yimithetho yelizwe laseCalifornia, e-USA, ngaphandle kwempikiswano yemithetho, nendawo efanelekileyo naziphi na iimbambano ezivela okanye ezinxulumene nayo nayiphi na into ziya kuba ziinkundla zikarhulumente nezomdibaniso ezikwiSan Francisco County, California. Ngaphandle kwamabango okhuseleko okanye olinganayo okanye amalungelo ngokubhekisele kumalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda (onokuthi uziswe kuyo nayiphi na inkundla efanelekileyo ngaphandle kokuthunyelwa kwebhondi), nayiphi na imbambano evela phantsi kwesi siVumelwano iya kuthi ekugqibeleni isonjululwe ngokungqinelana neMithetho egqibeleleyo yokuGweba I-Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) ngabalamli abathathu abonyulwe ngokwemigaqo enjalo. Ulamlo luya kwenzeka eSan Francisco, eCalifornia, ngolwimi lwesiNgesi kwaye isigqibo sokulamla sinokunyanzeliswa nakweyiphi na inkundla. Iqela elichaphazelekayo kulo naliphi na inyathelo okanye inkqubo yokunyanzelisa esi siVumelwano liya kuba nelungelo kwiindleko kunye neefizi zamagqwetha. Ukuba naliphi na icandelo lesi siVumelwano ligcinwe lingasebenzi okanye linganyanzeliseki, elo candelo liya kuthathwa njengelibonisa iinjongo zala maqela, kwaye iinxalenye ezishiyekileyo ziya kuhlala zisebenza ngokupheleleyo. Ukurhoxiswa liqela lalo naliphi na ixesha okanye imeko yesi siVumelwano okanye nakuphi na ukophulwa kwaso, nakweyiphi na imeko, ngekhe kulirhoxise elo xesha okanye loo meko okanye nakuphi na ukophulwa kwayo okulandelayo. Unokwabela amalungelo akho phantsi kwesi siVumelwano kulo naliphi na iqela elivumayo, kwaye livume ukubotshelelwa, yimigaqo kunye neemeko zalo; Into inokunikezela ngamalungelo ayo phantsi kwesi siVumelwano ngaphandle kwemiqathango. Esi siVumelwano siza kubophelela kwaye siza kuqinisekisa ukuba amaqela ayonwaba, abalandela emva kwabo kunye nabavumelekileyo ukuba babelwe.
Siza kuzama konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuba iimveliso ezithunyelwa kubathengi bethu zikumgangatho olungileyo.
1. Ukubuyisela kunye nokubuyisela imali
-Umthengi kufuneka athumele iimveliso kwidilesi ebuyiselweyo eya kuthi uyinikwe nge-imeyile. Imbuyekezo epheleleyo iya kuqhutywa emva kokufumana iphakheji ebuyisiweyo.
-Ukuphambuka kombala kubekhona ngenxa yempembelelo yombala ngumbonisi wePC kunye nemeko yokukhanyisa. Ingxaki esemgangathweni ayifakwanga ekuhambeni kombala.
-Ingxaki yomgangatho inokuchazwa njengeziphene ezibonakalayo ezisemgangathweni, ngaphandle kokulandela iimfuno zokwenza ngokwezifiso zabathengi kunye nokuphambuka kwesayizi kwiikhrayitheriya zoqobo kunye nevprocleaningagency.com yokucoca imilinganiselo ye-napa.
-Ngokwempikiswano yokuphambuka kubungakanani, nceda uthathe iifoto ezithile kwintengiso ngokuyibeka phantsi kwaye ubeke iteyiphu-umlinganiso wokulinganisa ingxaki. Umthengi uya kufaka iifoto ku-service@amthing.com kwaye ku-www.amthing.com banokubakho abasebenzi abachongiweyo ukuba bathathe impikiswano kwaye impendulo iya kunikezelwa kwisithuba seeyure ezingama-48 (ngaphandle kweeholide).
-Ngokuqwalaselwa kokungafaniyo kwemveliso kwimeko yemveliso kuKwenziweyo okwenziwe ngokwezifiso. Sinokukunika inkonzo yokuhlaziya ngokujonga kwimfuno zakho. Ukubuya okanye ukutshintshisiswa kwemveliso kwiCustom Made ayamkelwanga.
-Asithathi naluphina uxanduva kulibaziseko lokusebenzisa kwakho imveliso ukuba ukuqhubekeka komyalelo owenziwe ngokwezifiso kulibazisekile ngenxa yokuhlawulwa kade kwemali yokuhlawulwa kwemveliso kwaye kuvela ngengxabano ekubuyiseni kwento okanye kutshintshiselwano.
-Asisamkeli isicelo sokubuyiselwa kwemveliso oyifumeneyo kwimeko apho imveliso ingakhange ihlangabezane nemfuno yakho kutshintsho lwesimbo kuyilo loyilo lwemveliso. Siza kuyilandela ngokungqongqo imfuno zakho kutshintsho loyilo lokuqala lwemveliso emva kokuba uhlawule iodolo efanelekileyo oyibekileyo.
-Senze izinto ngokulandela ngokungqongqo isitayile kunye nezinto ezibonakalayo kwisiza, zonke izicelo zembuyekezo ezinje ngokungathandi umfanekiso endi-odole, ukungoneliseki malunga nomgangatho hayi izinto endizithandayo njl.njl.
-Ukuba awonelisekanga malunga nemveliso efunyenwe kuthi, nceda unxibelelane nenkonzo yethu yabathengi ngokukhawuleza.
Ukugcina umdla wakho, asikuvumeli ukubuyiswa kweempahla awonelisekanga ngazo ngaphandle kwesigunyaziso sokubuyisa. Asinaxanduva lokubuyiselwa kwemali okanye sithathe impikiswano yakho kwimveliso emva kokuba ubuyisile impahla ngaphandle koGunyaziso lokuBuyisa kwaye ubangele ukuba iphakheji ilahlekile ngexesha lokubuya.
2. Buyisela kunye noTshintshiselwano
Ukuze wenze utshintshiselwano, zonke iibhegi zobhaka mazibe kwindawo yoqobo, enganxitywanga, imeko yesitokhwe efileyo, ngokupakisha koqobo okanye awuyi kulungela ukutshintshiselana. Utshintshiselwano lunokwenziwa kuphela ukuba iimveliso bezineziphene zefektri kwaye / okanye sisiphumo seempazamo zethu.
Izizathu ezingamkelekanga zotshintshiselwano ngabathengi bakhethe ubungakanani obungalunganga / umbala ongalunganga / isitayile esingalunganga / umthengi uthatha isigqibo sokuba akasafuni.
www.amthing.com inelungelo lokufaka le ntlawulo kulo naluphi na utshintsho! Asiyi kwamkela mbuyekezo ukuba sikuthumele iimveliso ezichanekileyo kodwa ungazitshintshela kwezo uzifunayo.
Funda umgaqo-nkqubo wethu kwaye uqiniseke ukuba ukhetha imveliso echanekileyo, umbala kunye nobungakanani kwaye ubuze nawuphi na umbuzo malunga neemveliso ngaphambi kokuba uthenge! Ungathumela ii-imeyile ku- service@amthing.com
Imiyalelo yokuBuya kweMpahla
Ngaphambi kokuba ubuyise iimpahla, nceda unxibelelane nathi kuqala ukuxoxa ngemiba onayo. Ngaphezulu kwe-90% yamatyala siyakwazi ukusombulula ingxaki, ngaphandle kokuba ubuye uthumele nantoni na.
Nceda uthumele i-imeyile kwinombolo yakho ye-oda ku-service@amthing.com, iSebe lethu leNkonzo yaBathengi liya kukunika ikhowudi yokubuyisa kunye nedilesi yokubuyisa, kunye neminye imiyalelo ebalulekileyo.
Inombolo ye-odolo ebuyisiweyo kufuneka iboniswe ngaphandle kwebhokisi obuyela kuyo www.amthing.com.
Ngokubanzi siyakucebisa ukuba ubuyise iimpahla eziphosakeleyo ngePosi kunokuba zithunyelwe njenge-DHL, i-UPS, ezi zithunyelwa zibiza kakhulu kunePosi.
3. Myalelo wokuCinywa
Ukwaneliseka kwabathengi kubalulekile kuthi sonke. Siza kuthumela ukuthengisa kwakho ngokukhawuleza okukhulu. Ukuba awufuni iimveliso emva kokuba uhlawule, nceda unxibelelane nathi ngaphakathi kweeyure ezingama-24 zokurhoxiswa.
Ukuba iodolo yakho ayikathunyelwa, sinokuyirhoxisela. Nangona kunjalo, asizukukwazi ukusebenza ngokurhoxisa xa iodolo yakho ithunyelwe
Ukukhetha i-Courier kwahlukile kumaxesha ngamaxesha, kwaye ukhetho luxhomekeke kakhulu kukhuseleko lwephakeji endaweni yesantya.
Sinothungelwano lokulungiselela ukwenza olona khetho lufanelekileyo kubathengi bethu.
Sithumela phantse kuyo nayiphi na indawo ehlabathini. Sisoloko siqinisekisa ukuba sijonga yonke into yethu yokufumana imali yomgunyathi yi kolibriusa.com kwaye sipakishe izinto zethu ngokufanelekileyo ngaphambi kokuba sizithumele. Zonke iiodolo zithunyelwa nokuba
Inkonzo yeKharityhulamu ye-EMS
I-DHL, iUPS, iFEDEX okanye iAirMail
Ukuhanjiswa kwe-UK kunikezelwa ngoku kumazwe e-EU (100% ukuthunyelwa ngokukhuselekileyo)
Kufuneka sibakhumbuze bonke abathengi ukuba sidinga oku kulandelayo ukuqinisekisa uhanjiso lwe-100% kuwe:
Idilesi epheleleyo enekhowudi yeposi
Inombolo yomnxeba (Oku kubalulekile ukuqinisekisa ukuHanjiswa okuQinisekisiweyo)
** Nceda uqiniseke ukuba kukho umntu oza kufumana iphakheji ukuba awukho kufutshane. ASIPHATHELElanga ukuba awuyifumani ipakethe yakho ngenxa yokuba ubungekho ukuze uyokuyithatha. Ukuba uyala ukuthunyelwa, asizukuthatha xanduva lokuthunyelwa.
** Nceda uqaphele ukuba ipakethe izisiwe kwaye imixholo ekule phakheji ibiwe, asizukubenoxanduva lwamatyala anjalo. Nangona kunjalo siza kuxoxa nomthengi malunga nengxaki. Ngokuhlutha ngokwesiko, siya kuthetha nabathengi ngabanye ukuphonononga ukuthunyelwa kwakhona. Enkosi!
Zonke iiodolo zihlala zithunyelwa zisuka kwindawo yokugcina izinto ngaphakathi kweeyure ezingama-48 ukuya kwezingama-72 zokufumana iodolo. Ukuba kukho ukulibaziseka kwi-oda yakho, siya kukwazisa nge-imeyile. Ixesha lokuthumela: I-3 ukuya kwi-12. Asinaxanduva lokulibaziseka kokuhambisa ngenqanawa njengoko singenalo ulawulo xa into ithunyelwa ngaphandle.
I-EMS Express eneMeko yokuKhangela kwi-Intanethi
Iintsuku ezi-7 ukuya kwezi-12 zomsebenzi ngokuxhomekeke kwindawo ekucocwa kuyo nakumasiko
UkuKhangelwa kwi-Intanethi kunokulandela umkhondo wepakeji yakho ngokwamanqanaba ahlukeneyo
ASIKHO ULAWULO malunga nokuhanjiswa emva kokuba kuthunyelwe
Ukucocwa kwamasiko kunye nokulibaziseka kungenakuphepheka kodwa akukho nto ixhalabisayo
Ukuhanjiswa kwe-EMS kokona kukhawulezileyo kwaye kunokwethenjelwa
Ukuhanjiswa kwe-UK nge-EMS yokuKhangelwa kwi-Intanethi
Ngokwesiqhelo iya kuthatha malunga neentsuku ezisi-7 ukuya kwezi-10 ukusuka e-China ukuya e-UK kunye nezinye iintsuku eziyi-7-10 ukusuka e-UK ukuya kwilizwe lakho (esekwe kwi-EU). Ukulandela umkhondo we-Royal Royal yase-UK kuyakuthunyelwa kuwe xa umthumeli wam wase-UK endihlaziya ngayo.
Ukuhamba ngokubanzi kokuhambisa ngenqanawa yiCHINA -> UK -> Ilizwe lakho le-EU
Indawo yokulandelela i-Royal Royal yase-UK: http://track.royalmail.com/portal/rm/track?
Indlela ekhuselekileyo kumazwe e-EU anjenge-Itali, iJamani, iOstriya, iHungary njl.
I-TNT / i-UPS / i-FEDEX yokuKhangela kwi-Intanethi
Iintsuku ezi-5 ukuya kwezi-12 zomsebenzi kuxhomekeka kwindawo ekuyiwa kuyo nasekucoceni amasiko
Ngokubanzi ngokukhawuleza kune-EMS Courier